तीनकुनेबाट ४२ बोरा प्याज बरामद, तीन जना पक्राउ - नेपालबहस
तीनकुनेबाट ४२ बोरा प्याज बरामद, तीन जना पक्राउ
१ असोज, काठमाडौं । तीनकुनेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले ४२ बो बोरा प्याज र ४० बोरा आलु बरामद गरेको छ । महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले तीनकुने हरितगृह तरकारी बजारबाट लुकाएर राखिएको अवस्थामा साढे ४२ बोरा प्याज र ४० बोरा आलु बरामद गरेको हो ।
बिजेस गौतमको पसलबाट २९ बोरा र ज्योती नाप अलर्टबाट साढे १३ बोरा प्याज बरामद गरेर प्रहरीलाई बुझाइएको समितिले जनाएको छ । यस्तै सालिकराम दुलालको पसलबाट ४० बोरा आलु बरामद भएको छ ।
उनीहरुलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ । भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि व्यापारीले मूल्य बढाएर बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा प्याजको अभाव गराउने र महंगो मूल्यमा बेच्न लगाउने व्यापारीलाई सरकारले खोजी खोजी पक्राउ गर्दै कारवाही गरिरहेको छ ।
खाद्यको थापाथली बिक्रीकक्षबाट रु ६० मा एककिलो प्याज ! २ दिन पहिले
६० रुपैयाँमै एक किलो प्याज किन्न पाइने ! ४ दिन पहिले
बजार अनुगमनबाट बरामद प्याज खाद्य कम्पनीले बिक्री गर्ने ४ दिन पहिले
प्याजमा कालोबजारी गरी बेच्ने पाँच पसललाई कारवाही ७ दिन पहिले
बढी मूल्यमा प्याज बिक्री गर्ने आठ पसल कारबाहीमा १ हप्ता पहिले
बजार अनुगमनमा निस्केका मन्त्री भट्ट आफै ग्राहक बनेपछि ! २ हप्ता पहिले
संसारका खानीमा कति सुन बाँकी होला ? ७ मिनेट पहिले
मुक्तिनाथ रेमिटको सेवा अब अष्ट्रेलियाबाट पनि ४० मिनेट पहिले
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ९ जना पक्राउ ४९ मिनेट पहिले